Sharif Hassan Sheikh Aden oo heshiis dhinaca amniga ah la galay shirkad Maraykan ah. | BuhodlePost.com
Sharif Hassan Sheikh Aden oo heshiis dhinaca amniga ah la galay shirkad Maraykan ah.
Jun 23, 2017 - jawaab
Baydhabo (Bpost)—Maamulka Koofurgalbeed Soomaaliya ayaa heshiis dhinaca ammaanka la gashay shirkad la magac baxday FSG taasoo hore lo oran jirey Blackwater.
Aasaasaha shirkadan Erick Prince ayaa sheegay in ay ka taageeri doonaan Maamul goboleedka KoofurGalbeed dhinacyada ammaanka,duulista iyo dib u dhiska
Madaxweynaha dowlad goboleedka KoofurGalbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa sheegay in heshiiska uu la galay shirkadan ay qeyb ka tahay sidii loo soo jiidan lahaa maalgashtayaal shisheeye iyo kuwa gudahaba.
Shirkadda FSG oo Hong Kong ka diiwaangashan ayaa hore loo oran jirey Blackwater waxana lagu eedeeyay dhibaatooyin ay ka sameysay dalka Ciraq oo ay hore ugaga howlgali jirtey.
Madaxweyne Sharif Xasan ayaa sheegay in uu isu keenay hogaamiyaal shirkado caalami ah kuwaasoo aqoonyahanada Soomaaliyeed ka kaashan doona sidii loo horumarin lahaa Koofurgalbeed Soomaaliya,hase yeeshee Shariif Xasan ayaan bixin faahfaahin ku aadan qarashka ku baxaya mashaariicda iyo xilliga la bilaabayaba.
Hase yeeshee dhul balaaran oo ka mid ah Koofurgalbeed Soomaaliya ayaa waxaa gacanta ku haya ururka Alshabaab,waxaana dhowaan ku dagaalamay deegaano ka mid ah gobolka Sh/hoose ciidamada dowlada Soomaaliya iyo AMISOM oo dhinac ah iyo ururka Alshabaab.